xayawaanka duurjoogta ah, ugaarsiga iyo kalluumeysiga | USAHello | USAHello
xayawaanka duurjoogta ah, ugaarsiga iyo kalluumeysiga
Ma waxaad tahay oo xiiso leh ugaadhsaday ama dhacdo xayawaanka duurjoogta ah iyo kalluun? Baro waxa aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan ugaarsiga iyo kalluumeysiga ee USA. Raadi ku saabsan xeerarka, noocyada la ilaaliyo, iyo sii joogi ammaan ah.
Kalluumaysta Missouri by Kbh3rd, CC.
Ugaarsiga iyo kalluumeysiga
ayaa lagu soo waramayaa ku saabsan Waxaa jira 14 milyan oo ugaarsato iyo ku saabsan 33 milyan oo kaluumaysato (dadka kalluunka) ee USA. Sharciyada ku saabsan sida ugaarsiga iyo kalluumeysiga kala duwan gobol ka gobol iyo xitaa gobolka gudahood.
awood loo kalluumaysto ama ugaadhsan oo kaliya meelo gaar ah aad noqon doontaan, on dhawr maalmood iyo waqtiyada qaarkood. waxaa loo ogolaan doonaa in aad isticmaasho oo kaliya hub gaar ah oo dilo xayawaanka gaar ah, oo waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay in aad xidhato orange si aad u waa la arki karo.
Waa sharci darro in ugaarsi ama kalluunka ee inta badan beeraha dadweynaha, oo aad la ticketed karaa iyo lagu ganaaxay xamaam oo qoynin, shinbiraha, berriga, kalluunka, ama dabagaalaha magaalada. In duurjoogta ah, ee ugaadhsiga iyo kaluumaysiga ee xoolaha waxaa nidaaminaya ilaa xad ka duwan taas oo ku xidhan gobolka. Waxaad ka heli kartaa halkaas oo si aad u ugaadhsadaan ee gobolka kasta iyo waxa xeerarka jira.
Ka hubi sarkaalka booliska ama maamulka duurjoogta ama khayraadka dabiiciga ah ee xaafaddaada, mararka qaarkood loo yaqaan duurjoogta ama ciyaarta ilaaliye a. laga yaabaa in lagaaga baahan doonaa inaad iibsato shati kalluumeysiga ama ugaarsiga ah oo xajiya aad la. ugaadhsiga sharci darrada ah iyada oo aan ruqsad waxaa loo yaqaan “ugaadhsiga sharci darrada ah” iyo natiijooyinka in ganaax daran.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay ogolaansho kaluumaysi ah. Fish webiyada iyo harooyinka qaar ka mid ah waa sun ah ay sabab u tahay wasakhaynta biyaha. waxaa laga yaabaa in laguu oggolaado in aad loo kalluumaysto, laakiinse waxaa laydinku digay doonaa inaadan cunin aad “qabsado”. “Qabasho iyo sii daayo” waa erey isboorti oo qeexaya xeerka kalluumaysiga inay ku qabtaan a, ka dibna waxaa mar kale dejinta free.
noocyada la ilaaliyo
xayawaanka qaar ka mid ah ay yihiin noocyada dhif ah iyo si ay u waxaa ilaaliya sharciga oo aan la ugaadhsado aawadeed karaa ama ku dhintay sabab kasta in xilli kasta. In Texas, tusaale ahaan, xoolaha laga ilaaliyo waxaa ka mid ah Bobcats, coyotes, rahyo, libaaxyada buurta, prairie eeyaha, bakaylaha, iyo qoolley.
Waxaa jiray dhacdooyin badan oo dadka ugaarsadaan oo aan daryeel ku haboon iyo raacin xeerka. About 1,000 qof ayaa la toogtay in shilalka ugaarsiga sanad walba ee North America, oo ku saabsan 100 ee dadkaas u dhinta dhaawac kuwa.
xayawaanka duurjoogta ah
Kuurgalo duur waa la soo dhaafay mar caadiga ah ee Maraykanka. xayawaanka qaar ka mid ah, gaar ah si ay North America, Waxaa laga yaabaa in aad u cusub. Waxaad isticmaali kartaa hage online si ay u bartaan oo ku saabsan noocyada duurjoogta ee USA.
shilalka baabuurta la xayawaanka duurjoogta ah
Meelaha baadiyaha ah, xayawaanka duurjoogta ah gudbaan laga yaabaa in wadada halka aad wadid. Tani waa caadi marka waagu iyo fiidkii iyo guga iyo dayrta. Isku dayga in ay ka fogaadaan keeni kartaa in hartay gaariga oo dhaawac culus. Khubarada ku talinaynaa in aad si toos ah wadid iyo hoos haddii ay suuragal tahay, iyo marka ammaan, jiid badan ka mid ah gaadiidka iyo xoolaha ka wadada ka saar, haddii aad awoodo. Tani waxay ka hortagi doonaa darawaliinta kale ka lilan si lama filaan ah oo shil.
Hadduu yahay neef weyn, call 911 si ay u sharxaan xaaladda, si sharci fulinta ama ciyaarta ilaalada ka saari kara halista iyo qori warbixinta dhacdada. Haddii qof dhaawacmay shil ah, Hubi in la si aad u hesho gargaar caafimaad isla markiiba ama maalinta ku xigta haddii dhaawac ma yihiin halis ah. Haddii aad ka soo baxdo kala duwan telefoonka, oo ninna ma dhex gudbo si ay u caawiyaan, si tartiib ah sii wado dhismaha kuugu dhow ee la telefoonka si aad u hesho caawimo. Shirkadaada caymiska u ogaysii wixii magdhow baabuurkaaga.
Haddii aad jiidho deero ama kulan kale oo xayawaan ah oo aad rabto hilibka, loo yaqaan “roadkill,” waxaad waydiisan kartaa sarkaal ciyaarta. Iyadoo ku xiran xaaladaha, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu ku qaadan kula. Gooryaanka iyo dulin kale waa dareen xayawaan kasta duurjoogta ah, marka hubi inaad nadiifisid iyo hilibka si taxadar leh u diyaariso.
badbaadada xayawaanka duurjoogta ah
Haddii aad la kulanto xayawaanka duurjoogta ah halka on foot ama xaafadaada ama halka socodka dheer ee dalka, mana isku dayeysey in ay qabsadaan, rabbayn, diirsado ama u dhaawici. Ilaali naftaada iyo xoolaha Saaxiibkiis iyo xoolaha, Dabcan, laakiinse ma aha xagga dhaawacmeen xayawaanka duurjoogta ah haddii lagama maarmaan in nafo la badbaadiyo. xayawaanka duurjoogta ah intooda badan iska socon doonaa haddii aad u guuxi ama dhagax tuur iyaga at. Qaar ka mid ah xayawaanka duurjoogta ah waxaa ilaaliya sharciga, halka qaar ka mid ah aad iyo xayawaanka guriga iyo waxyeelo xoolaha keeni karaa. Hubi xeerarka maxalliga ah.
Waxaa jira kuwo cudurada qandaraas karaa xayawaanka duurjoogta ah ama dulin ku nool iyaga on, oo ay ku jiraan tulariimiya, raabiyada, oo belaayadiina bubonic. Xitaa kaneecada waxay keeni kartaa cudur oo ay ku jiraan Virus Nile West in dadka ugu nugul.
Animal iyo xayawaanka xeerarka
Cisaynayo veterans our: A qaxootiga ku faani u adeegta dalka